စတင်ရောင်းချပြီး ၅မိနစ်အတွင်းအကုန်ကုန်သွားတဲ့ Nokia7Plus
8 Mar 2018 . 6:39 PM
Nokia7Plus ကိုရောင်းရပါ့မလား ? သူ့ရဲ့Fans တွေကရောကြိုက်မှကြိုက်ကြပါ့မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေပါသလား… ။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရောင်းချခဲ့တဲ့ Nokia7Plus ကတော့ စတင်ရောင်းချပြီး ၅မိနစ်အတွင်းမှာပဲ တစ်လုံးမှမကျန်အောင်ရောင်းချလိုက်ရပါတယ်။
အရောင်းဆိုင်တံခါးစဖွင့်တဲ့အချိန်ကတော့ မနက် ၁၀ နာရီ ၇ မိနစ်မှာဖြစ်ပြီး ၁၀ နာရီ ၁၂ မိနစ်မှာတော့ Nokia7Plus တွေအကုန်လုံးရောင်းကုန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ 4GB/64GB version ကို မြန်မာငွေ ၅သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ 6GB/64GB version ကိုမြန်မာငွေ ၅သိန်းခွဲ ဝန်းကျင်ကျသင့်မှာဖြစ် ပြီး April လရောက်မှတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာကတော့ နောက်တစ်ပတ် (တိတိကျကျပြောရရင် March 15) မှဒုတိယအသုတ်အနေနဲ့ ထပ်မံရောင်းချပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပြီး အလုံးရေ ဘယ်လောက်ဆိုတာကိုတော့ လျှို့ဝှက်ထားပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Nokia ကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အမာခံ Fans တွေအပြည့်အဝ ပြန်ရရှိနေတာဖြစ်ပြီး Father is Back ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နေတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
Nokia7Plus ဟာ February 2018 မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ MWC ပွဲမှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး HMD Global Company ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် တန်းမြင့် Flagship စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Nokia7Plus ကိုရောငျးရပါ့မလား ? သူ့ရဲ့Fans တှကေရောကွိုကျမှကွိုကျကွပါ့မလားဆိုပွီးစိုးရိမျနပေါသလား… ။ တရုတျနိုငျငံမှာ ရောငျးခခြဲ့တဲ့ Nokia7Plus ကတော့ စတငျရောငျးခပြွီး ၅မိနဈအတှငျးမှာပဲ တဈလုံးမှမကနျြအောငျရောငျးခလြိုကျရပါတယျ။
အရောငျးဆိုငျတံခါးစဖှငျ့တဲ့အခြိနျကတော့ မနကျ ၁၀ နာရီ ၇ မိနဈမှာဖွဈပွီး ၁၀ နာရီ ၁၂ မိနဈမှာတော့ Nokia7Plus တှအေကုနျလုံးရောငျးကုနျသှားတာဖွဈတယျလို့ဖျောပွထားပါတယျ။ ဖုနျးရဲ့ဈေးနှုနျးကတော့ 4GB/64GB version ကို မွနျမာငှေ ၅သိနျးဝနျးကငျြနဲ့ 6GB/64GB version ကိုမွနျမာငှေ ၅သိနျးခှဲ ဝနျးကငျြကသြငျ့မှာဖွဈ ပွီး April လရောကျမှတဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ရောငျးခပြေးသှားမှာဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံမှာကတော့ နောကျတဈပတျ (တိတိကကြပြွောရရငျ March 15) မှဒုတိယအသုတျအနနေဲ့ ထပျမံရောငျးခပြေးသှားဦးမှာဖွဈပွီး အလုံးရေ ဘယျလောကျဆိုတာကိုတော့ လြှို့ဝှကျထားပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ Nokia ကတော့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ အမာခံ Fans တှအေပွညျ့အဝ ပွနျရရှိနတောဖွဈပွီး Father is Back ဆိုတဲ့ဆောငျပုဒျကို လကျတှအေ့ကောငျအထညျဖျောနတေယျလို့ယုံကွညျပါတယျ။
Nokia7Plus ဟာ February 2018 မှာကငျြးပခဲ့တဲ့ MWC ပှဲမှာမိတျဆကျခဲ့တဲ့ဖုနျးတဈလုံးဖွဈပွီး HMD Global Company ရဲ့ နောကျဆုံးထှကျ တနျးမွငျ့ Flagship စမတျဖုနျးတဈလုံးပဲဖွဈပါတယျ။